I-HP Mini 1103 10.1-intshi Netbook Laptop Ukubuyekezwa Kwikhompyutha Yomuntu siqu
Ukuthenga Iziqondiso Ama-laptops
I-HP Mini 1103 I-Netbook PC ye-10.1-intshi
by UMark Kyrnin
Umzila omncane we-HP we-Netbooks uvaliwe. Kungenzeka ukuthi ukwazi ukuthola emakethe asetshenzisiwe kodwa i-HP iye yafaka i-HP Stream 11 entsha entsha ehlinzeka nge-Windows laptop option ephansi.
Aug 31 2011 - I-HP Mini 1103 isithatha ngokuyinhloko izici ezitholakala ku- netbook yabathengi evamile futhi ineza izici ezimbalwa zeklasi lebhizinisi njengekrini lokulwa ne-Bluetooth ne-Bluetooth. Lokhu kusiza ukugcina intengo ibe yi-$ 300 kodwa futhi kusho ukuthi akuyona into enhle njengamanye ama-netbooks weklasi lebhizinisi. Ngokujabulisayo, ikhibhodi ikhululekile nakuba ingahle ibe mnandi njengenye imiklamo yayo futhi ihlinzeka ngezikhathi ezithile ezinde kakhulu. Ukudumazeka okukhulu kubasebenzisi bebhizinisi nakuba kungabikho ngokwezifiso zokuthuthukisa ezinye izingxenye.
I-Long Running Times
I-High Performance Hard Drive
Ikhibhodi Ngenkathi Enhle, Awukho Ezingeni le-HP's Other Netbooks
Ayikho Izinketho zokwenza ngokwezifiso ezitholakalayo
I-Intel Atom N455 Single Core Mobile Processor
I-1GB PC3-8500 Imemori ye-DDR3
10.1 "I-WSVGA (1024x600) Ukubukwa kwe-Backpack LED ne-VGA Webcam
I-Intel GMA 3150 Integrated Graphics
I-Fast Ethernet, i-802.11b / g / n Engenantambo, i-Bluetooth
I-USB 2.0, iVGA, i-5-in-1 iKhadi Reader
10.6 "x 7.5" x .9 "@ 2.8 lbs.
I-Windows 7 Starter, i-Office Starter
Isibuyekezo - HP Mini 1103
Aug 31 2011 - I-HP Mini Mini i-HP 1103 iyinhlangano ye-netbook ephansi yamabhizinisi aphansi. Kuthatha izici eziningi eziyinhloko ze-HP Mini 5103 ebiza kakhulu. Yiqiniso, ithegi yentengo ka-$ 300 isho ukuthi eziningi zezinto ezinhle kakhulu kufanele zishiywe. Lokhu kufaka phakathi ukusebenzisa i-chassis yepulasitiki kunokuba i-aluminium eqinile kakhulu negobolondo ye-magnesium ye-5103. Ukuma nokuklanywa konke kufana kakhulu namabhuku abo abathengi kunamamodeli ekilasi lebhizinisi.
Ngokweprosesa, isebenzisa inqubo ejwayelekile ye-Intel Atom N455 etholakala eningi lamabhuku entengo afanayo. Njengoba lokhu kuyi-core processor eyodwa kunomsebenzi olinganiselwe kodwa ufanelekile ukuphequlula okuyisisekelo kwewebhu, i-imeyili, kanye nomkhiqizo ongayidinga kusuka ohlelweni olunjalo. Isebenzisa inkumbulo entsha ye-DDR3 kodwa ivinjelwe ku-1GB nje kuphela ngezidingo zokulayisense kwe- Windows 7 Starter Starter system.
Umehluko owodwa omkhulu namathebhulethi we-HP uma kuqhathaniswa nenye yonke imakethe yisitoreji. Ngenkathi i-Mini 1103 ivinjelwe yilayisense ye-Windows 7 yokuqala noma i-hard drive ye-250GB, i-HP isebenzisa ukushayela kwezinga le-7200rpm le-speed esheshayo ngenkathi iningi lezincwadi lisebenzisa ama-5400rpm. Lokhu kusho ukuthi i-netbook ishesha ngokushesha ekukhuleni nasekulayisheni izinhlelo kunenethabhu evamile. Ngokuvamile, lokhu kwenza isipiliyoni esithokozisa kakhulu kodwa namanje kuyindlela elula kakhulu ye-laptops yendabuko ngenxa yenkinga yokucubungula nememori.
Omunye umehluko nge-HP Mini 1103 uma kuqhathaniswa nabasebenzisi abaningi bebhajethi yama-netbook banokuxhumana. I-Bluetooth inikezwa ukuthi isebenze ngamakhemikhali angenawaya afana namagundane noma ukuhlehlisa ifoni ephathekayo . Lesi yisici esincane kodwa esihle esivela phambili esingasisiza ngempela abathengi abathile ngisho noma bengenasifiso sokusebenzisa lokhu njengebhizinisi.
Ukuvula i-HP Mini 1103 kuzophinde kuboniswe umehluko omkhulu amabili uma kuqhathaniswa namathebhulethi abathengi. Okokuqala, iphaneli yokubonisa lingavulwa ama-180 degrees egcwele ukuze lilale ngokuphelele kwi-tablet noma ngaphezulu. Azikho amacala amaningi lapho lokhu kuzodingeka kodwa kuyinto yokuphawula. Okwesibili, ukuboniswa kuhlanganiswe ne-anti-glare yokugqoka kunokuba kusetshenziswe i-netbook yomthengi wendabuko. Lokhu kunikeza inzuzo enkulu uma i-netbook izosetshenziswa ngaphandle noma ezimweni ezithile zokukhanyisa ezinzima. Ukuboniswa kwe-10.1-intshi akuyona into enhle njengento ebiza kakhulu engu-5103 njengoba umbala, ukukhanya nokubukela konke kubonakala sengathi kuncane kakhulu.
Ama-netbook amaningi angabizi kakhulu emakethe athambekele ekulondolozeni izindleko ngokunikeza iphakethe elincane lamatrikhi amathathu. I-HP inqume ukusebenzisa ipakethe yebhethri eyisithupha ngesilinganiso samandla we-55WHr. Ekusakazeni kwevidiyo ukuhlolwa kokudlala, i-Mini 1013 yakwazi ukugijima amahora angaphezu kwesikhombisa ngaphambi kokuya kwimodi yokulinda. Lokhu kubeka njengenye yezikhathi ezihamba phambili ezimakethe, ikakhulukazi kumanani aphansi anjalo. Ukusetshenziswa okungaphezulu okujwayelekile kufanele kudlule amahora ayisishiyagalombili nesigamu.
Ikhibhodi ye-HP Mini 1103 ihlukile kancane. Esikhundleni sokuklama okukodwa kwe-Mini 210, isebenzisa isitayela sendabuko kancane. Ukuhlelwa ngokwayo kuhle ngokukhiye okugcwele kwesokudla nokungakwesokunxele. Kumele kuqashelwe ukuthi umugqa wenkinobho yomsebenzi usetshenziselwa ngokuyinhloko njengokulawulwa kwemidiya ngenkathi ukhiye womsebenzi kungokwesibini okungathatha ezinye ukuzisebenzisa ikakhulu uma ujwayele izinqamuleli ezijwayelekile. I-trackpad yincinjana encane kunezinye zezinhlobo ze-HP kodwa yanikela ngalesi sikhala ngezinkinobho zangakwesokunxele nezingakwesokunxele. Lokhu empeleni kuyinto ekhethekayo ezinkinobho ezihlanganisiwe ezitholakala kwezinye ze-HP netbooks zangaphambilini.
Amakhompiyutha eDeskithophu ne-Laptop avuselelwe
Ama-Laptops ama-Windows ama-8 amahle kakhulu okungawathenga ku-2018
I-Lenovo 3000 Y410
I-Acer C720 ngokumelene ne-Samsung Series 3 XE303 Chromebook
I-Samsung Series 3 NP300V5A-A03US 15.6-intshi
I-Laptops 10 Ezingcono kakhulu zabaFundi BeKholeji Ukuthenga Ngo-2018
Yimuphi i-MacBook okufanele ngiyithenge? I-MacBooks emihle kakhulu ka-2018
Ama-laptops angu-7 amahle kakhulu wokugembula okumele athenge ngo-2018
UDell Inspiron 15 3000 (3551)
Ukufaka ama-footnotes kuDokhumenti yeZwi
Kuyini i-Beta Software?
Qala iphrojekthi entsha ye-iMovie
Izingosi Zokuxhumana Nezenhlalo Zokukhuthaza Ibhulogi Yakho
I-VoIP egijima ku-LAN engenantambo
Okudingeka Uyenze Ukulungisa i-iPod ene-Frozen noma i-iPhone
Ezinye izindlela zokuthola imisindo yamahhala
Indlela Yokwakha i-UEFI Bootable Ubuntu USB Drive usebenzisa iWindows
Ama-Loudspeakers we-Bookshelf we-SVS SBS-01 abukeziwe
I-iPhone Best Developers Game
Iyini ifayela le-XML?
Funda Ukuthumela Ngokuqondile Isinamathiselwe Ne-Yahoo Mail
Kuzobe kuthatha isikhathi esingakanani isipele sokuqala?
Indlela Yokufaka Ubuntu Ngaphakathi KweWindows 10 Ukusebenzisa iWUBI Nge-UEFI Support
Ikhwalithi yekhompyutha Faka amavidiyo
Kudluliselwa ama-movie angu-8mm we-movie yama-Old to DVD noma i-VHS
I-Tri Band Wireless Routers nge-WiGig Support nokuningi
Indlela Yokuguqula Imilayezo Esusiwe Ngokuzenzakalelayo ku-Outlook
Isizathu Sokuba Uzothanda I-'Tard the Grumpy Cat 'Meme
I-Litecoin: Lokho Okuyiyo nokuthi Kusebenza Kanjani